Isibonelelo seoyile yeGumbi, i-Hotel Diffuser, iArhente yeHotela yehotele evela kuMvelisi waseChina
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lo shishino:Manufacturer IMakethe: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Ngaphandle:61% - 70% ICredit:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report Inkcazo:Igumbi leoyile ye-oli,I-Hotel Scor Diffuser,I-Hotel Aroma Diffuser,I-Diffuser yehotele,,
Home > Imveliso > I-Diffuser yehotele
Iintlobo zeMveliso ze- I-Diffuser yehotele , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Igumbi leoyile ye-oli , I-Hotel Scor Diffuser ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
I-Ultrasonic Essentialential Arhente Diffusers yabantwana
Iplagi ekujoliswe kuyo kwiLavender oli Nebulizer Diffuser
Indawo yokulahla amanzi yeyona iThagethi eNgcono yeoyile efunekayo
Igumbi lehotele Iphunga Humidifier Aroma Diffuser Machine
I-100ml enobunkunkqele bobuchwephesha be-Ultrasonic Diffuser ebalulekileyo yeoyile
I-2019 yeeNtengiso eziNgcono zeoyile yeAromatherapy eNkulu
I-Mini Aromatherapy I-Wooden Aroma Air Diffuser
I-300ml Ithagethi yeKhaya yoQhaqho lweoyile yeUtrasonic
I-Lily Vase Ithagethi yeLtrasonic ye-oyile ye-Australia
Ithagethi ye-Ultrasonic Arhente Ebaluleke kakhulu kwi-oyile yeZityalo
Ithagethi i-Australia 500ML Electric Aromatherapy Diffuser
Izibane ze-Target Aromatherapy Diffuser ebalulekileyo yeoyile
Iithagethi ze-oyile ezithuleyo eziBalulekileyo zeAyi
Umbane oPhezulu woMbane oBalulekileyo kwiLitha yeThagethi eyi-Australia
Ithagethi yeSharper Image Wonke umntu oPhila ngeSitayile kwiVenkile
Ithagethi ebaluleke kakhulu kwi-oli Diffuser Humidifier ngentliziyo
Ithagethi yeGumbi leThagethi epholileyo iMistress Diffuser
Ukucwangciswa kweentyatyambo iAromatherapy ebalulekileyo yeoyile
Ngama-200ml DC 24V aKhanyisela ukukhanya kwe-oli eyiNtloko
I-Ultrasonic Essentialential Arhente Diffusers yabantwana Yenza phantse nayiphi na indawo ukuba ibaluleke ngakumbi nge-Essentialential Diffuser, uyilo olubuthathaka. Esi sisithunzi singabonakaliyo ivumba lokuhombisa sibonisa uyilo oluhle oluphucula phantse nayiphi na itafile ephezulu. Izinto ezingafaniyo neoyile...
Iplagi ekujoliswe kuyo kwiLavender oli Nebulizer Diffuser I-Diffuser yethu eyi-300ml yenye yeendlela ezilungileyo zonwabe xa usenza ioyile ebalulekileyo emoyeni. Sebenzisa indlela yokuhambisa amanzi kunye netekhnoloji ye-ultrasonic , iioyile ezifanelekileyo azifudumezi-gcina umgangatho wazo kunye nentembeko. Le 300ml...
Indawo yokulahla amanzi yeyona iThagethi eNgcono yeoyile efunekayo Ukucima ngaphandle kokuzenzekelayo okungenamanzi: Le yeza ilususa icima ngokuzenzekelayo xa amanzi ephelelwa. I-ultrasonus diffuser inokulingana kwaye iphakamise ikhaya lakho, iofisi, isitudiyo seyoga, umthambo okanye ipatio. Umsebenzi othule kakhulu...
Ixabiso lento: USD 13.69 - 15.08 / Piece/Pieces
I-New Music Music Diffuser ye-Ultrasonic Mist epholileyo I-DITUO-Umgaqo wethu kukubonelela abaThengi ngeyona Nkonzo ineenkcukacha. Isithako esiliwayo ngasinye, sinesitayile salo esahlukileyo, esimele i-DITUO sikwayinto eyahlukileyo. I-Bluetooth Humidifier-Isithambisi esifunekayo seoyile eyiDiskuser yinguqulelo entle....
Igumbi lehotele Iphunga Humidifier Aroma Diffuser Machine I-DITUO diffuser yeoyile inyusele kwi-280ml yomthamo, inkungu inokuhlala ixesha elide kunangaphambili. Ukwenza ikhaya lakho libe nephunga elingcono ngetekhnoloji yokuphamba okuqhubela phambili ye-ultrasonic vaporizing, iitapile zokuhlambela izinkuni ngokuthe...
I-100ml enobunkunkqele bobuchwephesha be-Ultrasonic Diffuser ebalulekileyo yeoyile I-VGRISE ENTSHA ye-UPGRADE: I-Essenial Ooyitoyitoyi yinguqulelo ehlaziyiweyo. Le nguqulo ingcono ivelisa ukungalunganga ngakumbi okongeza umswakama kunye nomoya omnandi kwigumbi lakho lokulala, i-nursery, ikhitshi, iofisi, okanye naphi...
I-2019 yeeNtengiso eziNgcono zeoyile yeAromatherapy eNkulu 1. Indawo yendlu ebonakalayo ebonakalayo efrathiweyo yiglasi, ivelise ukukhanya kwe-LED. 2. Ukuphambuka kwezinto eziphezulu ze-Ultrasonic kugcina imvelaphi yeoyile eyimfuneko. Isimo semolekyuli yantlandlolo, ikunceda ukuba ufumane umoya wequintessential...
I-Mini Aromatherapy I-Wooden Aroma Air Diffuser Ioyile eziyimfuneko ziluncedo ngokungathandabuzekiyo kwimizimba yethu kunye neemvakalelo. Besisoloko sifuna izibonelelo zeoyile ukuba zingene ngokupheleleyo kwimizimba yethu, akunjalo? Ngoku, zininzi iindlela zokwandisa izibonelelo zeoyile eziyimfuneko. Masithethe enye:...
Ixabiso lento: USD 13.54 - 15.39 / Piece/Pieces
I-300ml Ithagethi yeKhaya yoQhaqho lweoyile yeUtrasonic Ngaba awonwabanga ngolusu olomileyo, iingcambu zempumlo kunye nomqala, okanye amehlo ajikayo ngenxa yokufuma okuphantsi? Umoya owomileyo awunakukhathazeka kwaye unakho nokunciphisa inkqubo yakho yokuphefumla. Cinga nje ngawe okanye abantwana bakho ukuba...
I-Lily Vase Ithagethi yeLtrasonic ye-oyile ye-Australia Ngokugqitywa kokutya okuziinkozo okokukhanya okwahlukileyo kunye nevayiza ephefumlelweyo enobumbeko, iitapile zokususa iinkuni ngenene zenza imisebenzi emine kwisixhobo esinye: umswakama womoya, isicoci, ukukhanya ebusuku kunye nearomatherapy. Isebenzisa amaza...
Ithagethi ye-Ultrasonic Arhente Ebaluleke kakhulu kwi-oyile yeZityalo Le plug-in mbao diffuser ixhasa 7 imibala ye-LED. Iziphumo ze-LED zinokuvulwa okanye zicinywe kwaye zisetelwe kwimibala ethile ukuba iyafuna. Iindlela ezi-4 zokuseta ixesha: iyure e-1 / iiyure ezi-3 / iiyure ezi-6 / eziqinileyo. Zivale...
Ithagethi i-Australia 500ML Electric Aromatherapy Diffuser Esi sixhobo se-oyile esifanelekileyo se-ultrasonic sisixhobo esimangalisayo sokusebenza. Ngaphandle kokusetyenziswa kwayo kwi-aromatherapy, le oli ifunekayo ifanelekile ukuba isebenze nokucoca umoya kunye nomoya wokuphefumla. Yisebenzise ukuphucula umoya...
Packaging: Ibhokisi engaphakathi: 170 * 170 * 205mm kunye ne-Master carton: 525 * 355 * 430mm / 12pcs
Izibane ze-Target Aromatherapy Diffuser ebalulekileyo yeoyile ISIQINISEKISO SE-AROMATHERAPY: Amanzi kunye neeoyile zevumba ziyafudunyezwa kwaye ziguqulwe zibe yimpazamo emangalisayo. Ukunciphisa uxinzelelo, ukususa iivumba ezingathandekiyo kunye nokuphucula imeko ngokubanzi . AMALUNGISELELO E-LED: Iinguqu ezi-umbala...
Iithagethi ze-oyile ezithuleyo eziBalulekileyo zeAyi Izixhobo zokuchiza ezahlukeneyo ezinokusetyenziswa kwigumbi lokulala, ukufunda, iofisi, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela, igumbi le-SPA, igumbi lokuzilolonga, ulwamkelo, igumbi lenkomfa, ihotele. Isibambi-xesha sisetelwe kwi-1 iyure, iiyure ezi-3 okanye iiyure...
Umbane oPhezulu woMbane oBalulekileyo kwiLitha yeThagethi eyi-Australia UMGAQO-NKQUBO: I-oyile yanamhlanje ye-oyile ifanelekile kwiofisi yakho, kwindawo yokuhlala, kwigumbi lokulala, nangaphezulu, i-ultrus diffuser eyilelwe ukugqitywa kwetyala okufana nokudla okuziinkozo . AMANQAKU E-DIMMABLE E-DIYMABLE: Iiplanga...
Ithagethi yeSharper Image Wonke umntu oPhila ngeSitayile kwiVenkile Ngama-400ml aBalulekileyo sisixhobo seoyile I-aroma yendalo eyahlukileyo ibonelela ngephunga elimnandi, ukukhanya kombala okutshintsha umbala ukudala imeko ezolileyo neyonwabisayo naphina. Ilungele ikhaya, iofisi, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlala,...
Ithagethi ebaluleke kakhulu kwi-oli Diffuser Humidifier ngentliziyo UKUZE UZE UZE UMBULELO UKUZE UMBULELO: Ngaba ucwangciso lwakho uxakekile, uxakekile uxakeke kakhulu? Ngaba ungathanda ukunciphisa uxinzelelo kwaye uzive uhlaziyekile? Le aromatherapy emangalisayo yeoyile yokutshabalalisa kunye nefreshener yomoya...
Ithagethi yeGumbi leThagethi epholileyo iMistress Diffuser Esi sidibanisi kwaye siyabanjiswa siyimichiza kwaye siyanyibilikisa senziwe ngococeko lomthi oluhle kakhulu kwaye sihamba nayo nayiphi na impahla ekhaya okanye eofisini. Idityaniswe ngeoyile yakho oyithandayo, ivumba leenkuni liya kuguqula igumbi lokuhlambela...
Ukucwangciswa kweentyatyambo iAromatherapy ebalulekileyo yeoyile 500ml I-oli Diffuser Isisitya seoyile esibaluleke kakhulu kunye nokukhanya kwemibala eyahlukeneyo Ubunzima beoyile engenabushushu I-Dituo isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic eqhubela phambili evumela ukungahambisi ioyile engenabushushu, ngaloo ndlela...
I-Ultrasonic Aromatherapy I-oyile yoMoya oHlaziyiweyo I-ILTRASONIC ESSentional OIL DIFFUSER. Le grafisi ye-ultrasonic ilungile kumagumbi kwaye iyiglasi efanelekileyo kwiglasi ekhitshini, kwigumbi lokuhlala, okanye kwigumbi lokulala. UKUQHUTYELWA NOKUGQIBELA KWESIQINISEKISO SEZIBHENO. Isithambiso esifunekayo seoyile...
Ngama-200ml DC 24V aKhanyisela ukukhanya kwe-oli eyiNtloko UKUJONGA: Yongeza loo spa efana ne-ambiance ekhayeni lakho okanye eofisini kunye nearomatherapy yethu ebalulekileyo yeoyile. Iiglasi zethu zisebenza ngokungxolayo ukuze ulale kamnandi naliphi na ixesha losuku. Ukuphelisa umoya owomileyo ngokuphumla komphunga...
KwiChina I-Diffuser yehotele Abaxhasi
Ukunikeza ioyile yeGumbi i-Diffuser, i-Dentuser yehotele, i-Hotel Aroma Diffuser evela kuMvelisi wase China.
I-Hotel Scor Diffuser kukusasaza ivumba kwiimbombo zehotele. Ihotele enevumba elimnandi liya kukuvumela ukuba uve iimvakalelo ezifudumeleyo, abahlobo abangaphandle kwendlu, bediniwe kwaye bediniwe imini yonke, bahlala bafuna ukufumana izibuko elifudumeleyo ukuze uthathe ikhefu. Kodwa ukubandezeleka kuzo zonke ihotele kuyafana, akukho zimpawu zodwa kunye nesitayile, khetha eyona ikufutshane ikukuziqhelisela uninzi lwethu.
Ndinokubatsalela njani abathengi ukuba ndihlale nabo? I-Hotel Aroma Diffuser yeyona ndlela ethe ngqo nefanelekileyo Emva kokuba ihotele ibe nephunga, iya kusinika umbono okhethekileyo. Akudingeki sichithe ixesha sicinga, siya kubona, sijonga, sidlula nje kuloo ndawo, sinuka kamnandi I-Hotel Diffuser inceda ihotele ukuba yenze iharbor efudumeleyo yabathengi, ivumela abathengi ukuba bapake apha, kwaye ivumba kukukhanya okhethiweyo kwindawo yokupaka.
Igumbi leoyile ye-oli
I-Hotel Scor Diffuser
I-Hotel Aroma Diffuser
Ubunzima beoyile ye-oli